Radio Masti 87.9 MHz मलाई अवार्ड आवश्यक छैन : खगेन्द्र लामिछाने
भर्सटायल अभिनेताको रुपमा परिचित खगेन्द्र लामिछाने एक कुशल लेखक पनि हुन् । पर्दामा जीवन्त अभिनय गर्न सिपालु उनले जुन फिल्ममा काम गर्दछन् त्यसबाट आफ्नो फरक पहिचान बनाएका छन् ।
हँसिलो स्वभावका उनी जुनसुकै फिल्ममा काम गर्दैनन् । अझ खगेन्द्र आफ्नै कथा र पटकथा भए मात्र फिल्ममा अभिनय गर्न राजी हुन्छन् ।
एक फिल्मबापत २५ लाखमाथी पारिश्रमिक बुझ्ने उनी गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको 'धनपति' फिल्मपछि यही बैशाख २१ गते नयाँ फिल्म 'डमरुको डण्डीबियो' लिएर हल पस्दैछन् ।
प्रायः पर्दामा सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्ममा काम गर्दै आइरहेका उनले यसमा भने एक डण्डीबियो खेलाडीको भूमिका निर्वाहा गरेका छन् । कथा पनि उनी आफैंले तयार पारेका हुन् ।
उनी भन्छन्, 'अन्य फिल्मभन्दा 'डमरुको डण्डीबियो' मा मेरो विल्कुलै फरक अवतार देख्न पाउनुहुन्छ । देशबाट लोप हुँदै गएको डण्डीबियोको कथा पर्दामा उतार्न खोज्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो । यस विषयमा प्रयाप्त ज्ञान हुन आवश्यक थियो । हामीले सक्ने मिहिनेत गरेर फिल्म तयार पारेका छौं ।'
हरेक फिल्मबाट खगेन्द्रले कथा, पटकथा वा अभिनेताको विधामा अवार्ड हात पार्दै आइरहेका छन् । तर, उनी आजसम्म नेपालमा हुने कुनै पनि अवार्ड कार्यक्रममा पुगेका छैनन् । 'पशुपतिप्रसाद' बाट उत्कृष्ट लेखन विधामा 'राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार' हात पार्दा समेत उनी लिन गएनन् । उनकी धर्मपत्नीले पुरस्कार ग्रहण गरेकी थिइन् ।
किन अवार्डप्रति वृतिष्णा ? मंगलवार पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने, 'मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि म पनि कलाकार हुन्छु । म त लेखक बन्छु भनेर गाउँबाट काठमाडौं छिरेको हुँ । तर, जानी-नजानी कलाकार भएँ । कलाकार हुन पाउँदा म यतिधेरै खुसी छु कि मलाई अवार्डको आवश्यकता नैै छैन ।'
'मानिसहरु सधै खुसीकै लागि संघर्ष गर्दछन् । मैले त्यो खुसी कलाकारिताबाट पाएको छु ।' खगेन्द्र थप्छन्, 'म कलाकार बन्न पाएर खुसी छु त्यसैले मलाई अवार्डले दिने खुसी ठूलो लाग्दैन । त्यो अवार्ड बरु अरु कसैले पाउँदा म थप खुसी हुन्छ ।'
उनी आफू कहिल्यै अवार्डका लागि भनेर काम नगर्ने पनि बताउँछन् । पछिल्लो समय खगेन्द्र बलिउड अभिनेता आमिर खानको बाटोमा हिँड्न थालेको चर्चा छ । आमिर र खगेन्द्रले छान्ने विषयवस्तु समाज केन्द्रित हुन्छन् ।
तपाई आमिर खानको बाटोमा हिँड्नु भएको हो ? पत्रकारको यस प्रश्नमा उनले सटिक उत्तर दिए, 'अरुले के भन्छन् भन्ने कुराले मलाई फरक पार्दैन । मात्र म के सोच्छु भन्ने कुरा ठूलो हो ।'